Posted on Waxaa laga yaabaa 21, 2022 Waxaa laga yaabaa 21, 2022 by Fei (aasaasaha)
3 JHF BELGIUM
5 ASTCO-Alaab-qeybiyeyaasha labbaad ee dharka gacanta ee Masar
6 Alaab-qeybiyeyaasha Dharka Gacanta Labaad ee Masar Gabagabo
Iibiyeyaasha dharka gacan labaadka ah Dalka Masar ayaa caan ka noqday dalka Masar iyadoo dad badan ay raadinayaan habab ay lacag ku dhaafsadaan. Maqaalkan, waxaan ku eegi doonaa 5-ta shirkadood ee ugu caansan iibiyeyaasha dharka labiska ee dalka. Waxaan sidoo kale ka hadli doonaa qaar ka mid ah qodobbada u horseeday caannimadooda. Sii wad akhri si aad wax badan u barato!
Hissen waa hormuudka dhoofinta dharka gacan labaad, fadhigeedu yahay Shiinaha, shirkaduna waxay khibrad qani ah u leedahay warshadaha dharka gacanta labaad. Hissen waxa uu ka iibiyay dharka la isticmaalay in ka badan 60 wadan. Iyaga oo leh 10 sano oo waayo-aragnimo ah, waxay aasaaseen aasaas muhiim ah goobta.
Hissen waa dhoofiyaha dharka loogu kalsoonaan karo ee adduunka oo dhan, isagoo diiradda saaraya mabda'a ilaalinta tayada. Kooxdooda xirfada leh waxay fulisaa nidaamka xakamaynta tayada adag.
Shirkaddu waxay caan ku tahay inay keento dharka gacan labaad oo tayo sare leh oo qiimo jaban ah. Iyada oo leh 3 warshadood oo waaweyn iyo 400 shaqaale khibrad leh, Hissen waxa ay siin kartaa tayo aad u weyn oo dhar la isticmaalay macaamiisheeda adduunka oo dhan.
Waxay dhiseen sumcad ah inay yihiin kuwa ugu fiican ganacsiga. Macaamiishoodana waxay ku kalsoonaan karaan inay helayaan qiimaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee dharkooda.
LMPT waa iibiye la isticmaalay oo ku takhasusay warshadaha dharka gacanta labaad. Shirkadda waxaa la aasaasay 1987, waxayna ujeedadeedu tahay inay bixiso dharka la isticmaalay ee ragga iyo dumarka, oo ay ku jiraan jaakadaha, gacmo dhaadheer, iyo kabaha.
Shirkaddu waa dhoofiye la isku halleyn karo oo la isticmaalo oo leh 35 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah, waxayna bixin karaan xulashooyin badan oo macaamiisha ah oo ay kala dooran karaan.
Ganacsiga dharka ee jumlada la isticmaalo waa warshado sii kordheysa, xaji meelaha aad ku fiican tahay iyo ballaarinta miisaankaaga ganacsi waa mid muhiim ah oo firfircoon.
LMPT waxay ku samaysay dadaalkeeda iyo takhasuskeeda aan joogsiga lahayn. Haddii aad ka raadinayso lammaane lagu kalsoonaan karo ganacsiga jumlada ee gacanta labaad, LMPT waa doorashadaada.
Jumlale ahaan dharka gacanta labaad, waayo-aragnimada xirfadeed ee ganacsiga jumlada ee dharka la isticmaalay waa lama huraan. Waxay soo ururiyaan oo ay ka soo ururiyaan dharka la isticmaalay ee adduunka oo dhan, ka dibna waxay u dhoofiyaan inta badan suuqa Waqooyiga Yurub.
JHF BELGIUM waxa ka go'an in ay ku bixiso badeecooyin tayo leh oo kala duwan qiimo dhaqaale, ku jihaysan suuqyada kala duwan ee aduunka Waxay soo saari karaan qiyaastii 6,000 kiiloogaraam maalintii.
Haddii aad xiisaynayso inaad ka soo iibsato dharka la isticmaalay JHF Belgium, fadlan la xidhiidh shirkadda wixii macluumaad dheeraad ah.
Wing999 waa alaab-qeybiye la isticmaalay oo ku takhasusay dhoofinta dharka la isticmaalay.
Suuqyadooda dharka labaad ee aasaasiga ah waa Waqooyiga Afrika, Bartamaha Afrika, iyo Koonfur Afrika. Waxay leeyihiin nidaam dib-u-warshadeeyn aad u weyn inta badan gobollada Koonfur-bari Aasiya. Waxay ka dhigtaa inay ururiyaan noocyada kala duwan ee dharka la isticmaalay, sida cabbirrada kala duwan, noocyada kala duwan, iyo dharka quruxda badan.
Wing999 waxay ku faantaa inay siin karto macaamiisheeda alaabada iyo adeegyada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Waxay ku raran yihiin dharka gacanta labaad ilaa 500 oo baal hal weel, iyo tirada ugu yar ee dalabkoodu wuxuu ka bilaabmaa 40 kg.
Iyada oo in ka badan 20 sano ee khibradda warshadaha dharka gacanta labaad, Wing999 waxay dhistay sumcad adag sida lammaane la isku halayn karo.
ASTCO-Alaab-qeybiyeyaasha labbaad ee dharka gacanta ee Masar
ASTCO waa alaab-qeybiye gacan labaad ah oo ka shaqeysa ganacsiga jumlada ee dharka la isticmaalay. Shirkaddu waxay rabta inay dhisto hab ka wanaagsan dib u warshadaynta dharka la isticmaalay.
Shirkaddu waxay caan ku tahay fikradeeda waara ee warshadaha dharka gacanta labaad, ururinta, dib u warshadaynta, iyo bixinta nidaamka oo dhan. Hadafka shirkadu si ay u dhisto hab ka wanaagsan dib u warshadaynta ee dharka la isticmaalay waa muhiim oo waqtigeeda ku habboon.
ASTCO waxay siin kartaa macaamiishood ku habboonaan iyo ku-tiirsanaan qurux badan. Waxay bixiyaan tiro dalabyo ah oo u dhexeeya 40 ilaa 100kg. Haddii aad xiisaynayso adeegyada ASTOC, fadlan kala xidhiidh iyaga wixii macluumaad dheeraad ah.
Alaab-qeybiyeyaasha Dharka Gacanta Labaad ee Masar Gabagabo
Haddii aad raadinayso nooc gaar ah oo dhar ah, waxa fiican inaad u dirto waydiin alaab-qeybiyaha. Tani waxay u ogolaan doontaa inay hubiyaan kaydkooda oo ay eegaan inay hayaan waxaad raadinayso. Markaad tan sameyso, waxaad ka fogaan kartaa inaad waqti lumiso inaad ka safarto hal meherad oo aad raadiso qaybta ugu fiican. Waxa kale oo muhiim ah in la xasuusto in kaydka alaab-qeybiyeyaasha ay u janjeeraan inay si joogto ah isu beddelaan, sidaas darteed had iyo jeer waa mudan tahay in dib loo eego xitaa haddii doorashadaada koowaad aan la heli karin. Wax guul ah ma ku heshay inaad hesho waxaad raadinaysay shantan shirkadood ee ugu sarreeya alaab-qeybiyeyaasha gacanta labaad ee Masar?
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta ugu Sarreysa ee ugu caansan Dharka Labaad ee Masar.
4 fikradaha ah5-ta ugu Sarreysa ee ugu caansan Dharka Labaad ee Masar"
Elana wuxuu leeyahay,
Ahaa, sheeko wacan oo ku saabsan qoraalkan halkan at this
Mareegaha, intaas oo dhan waan akhriyay, markaa hadda aniga oo tan ka faalloonaya
May 29, 2022 at 10: am 51
Waxaad hubaal ka arki kartaa xamaasaddaada shaqada aad qorto.
Goobtu waxay rajaynaysaa qorayaal badan oo xamaasad leh sida adiga oo kale oo aan ka baqin
in la sheego sida ay u aaminsan yihiin. Mar walba raac qalbigaaga.
May 31, 2022 at 10: 13 pm
Runtii aad ayay u adag tahay noloshan waxqabadka ka buuxda
ka dhegeyso wararka TV-ga, sidaas darteed si fudud waxaan u isticmaalaa shabakadda caalamiga ah ujeedadaas,
oo aad hesho wararkii ugu dambeeyay
June 2, 2022 at 3: 02 pm
Runtii waa xog aad u wanaagsan oo waxtar leh. Waan ku faraxsanahay inaad si fudud nala wadaagtay macluumaadkan waxtarka leh. Fadlan sidan noogula soo socodsii. Waad ku mahadsan tahay wadaagida
June 23, 2022 at 9: 38 pm